सुत्ने कोठामा कहिल्यै राख्नुहुदैन यस्ता वस्तु : कंगाल बनिन्छ ! - Mitho Khabar
सुत्ने कोठामा कहिल्यै राख्नुहुदैन यस्ता वस्तु : कंगाल बनिन्छ !
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on सुत्ने कोठामा कहिल्यै राख्नुहुदैन यस्ता वस्तु : कंगाल बनिन्छ !
हाम्रो आराम अनि आनदं लिन सुत्ने कोठा महत्वपूर्ण मानिन्छ । दिनभरी काम गरेर आराम अनि एकान्त हो सुत्नेकोठा यसमा पनि धेरै राम्रा र नराम्रारा छन् । सुत्ने कोठमा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्तीले त्यस कोठामा सुत्ने मानिसहरु बिच अविश्वास पैदा गरिदिन्छन् घरमा आएका पाहुनाहरुलाई अतिथी गृह या ड्राईङ रुममा नै राख्नु पर्छ । सबै मानिसहरुलाई आफ्नो सुत्ने कोठमा ल्याउनु राम्रो हुदैन। यदि अरुलाई आफ्नो बेडमा सुताउनु भयो भने बेडबाट नेगेटीभ ईनर्जी आउँछ जसबाट पती पत्नीमा फाटो आउँछ ।
प्राय मनिसहरुलाई आफ्नै कोठमा वास बेसीन लगाउन मन पर्छ । तर यस्तो गर्नाले पति पत्नीबिच विश्वास कम हुदै जाछ । यदि तपाईको कोठामा पनि वास बेसीन खुला छ भने त्यसलाई पर्दाले छोप्नुहोस् सुत्ने कोठामा बेड देखिने गरि सिसा नलगाउनु होस् । यस्तो गर्नु निकै नराम्रो मानिन्छ । जसले गर्दा पति पत्नीबचिको शान्ती भंग हुन्छ सुत्ने कोठमाका कहिल्यै पनि काडेदार विरुवा वा फूलहरु नराख्नुहोस् । यदि राख्ने चाहना छ भने दुई ओटा गमला र त्यसमा सुन्दर फूलहरु राख्नुहोस् ।
बेडमुनी जुत्ता चप्पलहरु कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् यस्तो गर्नाले त्यो बेडमा सुत्नेहरुको दुर्भाग्य बढ्छ बेडमुनी राख्न नहुने अर्को कुरा हो बिजुलीका उपकारणहरु यी सामानहरु कहिल्यै पनि बेडमुनी राख्नुहुदैन । यी सामानहरु बेडमुनी राख्नाले त्यो बेडमा सुत्नेहरुको झडगा भईरहन्छ ।
यसैगरी शास्त्र भन्छ ‘दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ ।’ रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
हनुमान चालिसा : हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ ।
फलामको उपकरण :सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो ।
मुला ; सिरानी मुनी मुला राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिल्छ शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट रोक्छ ।
फूल : सुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ताजा महसुस हुने समेत शास्त्रले उल्लेख गरेको छ पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।
दुर्गा सप्तसती पाठ : दुर्गा सप्तसती पाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख छ यसो गर्दा विहानमा उठ्दा ताजापन अनुभव समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।